Fibromyalgia sy Gluten: Afaka manome mamaivay ao amin'ny vatana ve ny sakafo misy gluten?
Fibromyalgia sy Gluten: Afaka manome ratra bebe kokoa amin'ny vatana ve ny sakafo misy?
18 / 02 / 2020 /Fanamarihana 0/i aretin-kozatra/av loza
Fibromyalgia sy Gluten
Betsaka ny olona manana fibromyalgia no mahatsikaritra fa miatrika gluten. Anisan'ny zavatra maro no mahatsapa fa ny gluten dia miteraka fanaintainana sy soritr'aretina miharatsy. Eto isika dia mandinika ny antony.
Efa naneho fahatsapana ho ratsy kokoa ianao raha mahazo mofo sy mofo tsy misy glène be loatra. Tsy irery ianao amin'izay!
Raha ny marina, fikarohana fikarohana maromaro (1) raha ny fehin-kevitra fa ny fahatsapana ny gluten dia antony mahatonga ny fibromyalgia. Miorina amin'ny fikarohana toy izany, maro ihany koa ireo manolo-kevitra ny hanandranao manapaka gluten raha manana fibromyalgia ianao. Amin'ity lahatsoratra ity dia hianaranao bebe kokoa momba ny fomba mety ho tratran'ny gluten ireo manana fibromyalgia - ary mety izany no izy Ho gaga anao ny ankamaroan'ny fampahalalana.
Ahoana no fiantraikan'ny Gluten amin'ny fibromyalgia?
Gluten dia proteinina ahitam-bokatra betsaka indrindra amin'ny varimbazaha, vary orza ary rye. Ny gluten dia manana fananana mampihetsika ny hormonina mifandraika amin'ny fahatsapanao noana, izay midika fa mihinana bebe kokoa ianao ary mamorona "faniriana mamy" mihoatra ny loharanon'ny angovo haingana (vokatra misy siramamy sy tavy betsaka).
Rehefa lanin'ny gluten iray ny gluten, dia miteraka fihetseham-po be loatra amin'ny lafiny iray, izay mety hahatonga fihetseham-po mamaivay ao anaty tsina kely. Izany no faritra ifangaroan ny otrikaina ao anaty vatana, ka ny faritra voadona io dia mitondra aretin-kibo ary tsy mampihena ny otrikaina mahavelona. Izay indray dia mitarika ho tsy be angovo, fahatsapana fa mivonto ny kibo, ary koa ny tsinain-kibo.
Torohevitra mivaingana ho an'ny fahasalamana tsodrano tsara kokoa:
Ny maro amin'ireo mpikambana maherin'ny 29500 ato amin'ny vondrona "Rheumatism and Chache Pain" dia mitatitra ny vokatry ny famatsiana ara-boajanahary sasantsasany. Manandrama fanampiana probiotics (bakteria tsinay tsara) na Mamenom-bavony. Ho an'ny maro dia mety hisy vokany tsara izany, ary fantatray koa fa ny fahasalamana tsinay dia tena zava-dehibe tokoa amin'ny fahatsapanao ny hafa - na eo amin'ny lafiny angovo izany na eo amin'ny toe-tsaina.
Midina eny amin'ny rindrina tsinay kely
Mpikaroka maromaro koa no miresaka momba ny "leakage ao amin'ny tsinainy" (2), izay ilazan'izy ireo ny fomba mety hahatonga ny fanehoan-kevitra mamaivay ao amin'ny tsina kely hanimba ny rindrina anatiny. Mino koa izy ireo fa izany dia mety hiteraka sombin-tsakafo sasany mamaky ny rindrina simba, ka mahatonga ny valin'ny autoimmune lehibe kokoa. Ny fanehoan-kevitry ny autoimmune dia midika fa ny hery fiarovan'ny tena dia manafika ny ampahany amin'ny sela ao amin'ny vatana. Izay, voajanahary, tsy dia tsara vintana. Izy io dia mety hiteraka fihetsika mamaivay ao amin'ny vatana - ary vao mainka mampitombo ny fanaintainana sy ny soritr'aretina fibromyalgia.
Sintona ny fihanaky ny rafitra fantsom-bidy
Ireto misy soritr'aretina mahazatra izay matetika azo iaretan'ny fihanaky ny vatana:
Olana sy torimaso olana
Indigestion (anisan'izany ny reflux asidra, constipation ary / na ny fivalanana)
Diso aretina any anaty krizy (tafiditra) fibrous zavona)
Fanaintainana ao anaty vatana manontolo
Vizana sy reraka
Fahasarotana amin'ny fitazonana lanja mety
Mitombo ny fihanaky ny tsimokaretina Candida sy ny aretin-tratra
Hitanao ve ny kofehy mena mifandray amin'io? Mampiasa angovo goavambe ny vatana mba hampihenana ny fivontosan'ny vatana - ary ny gluten dia manampy amin'ny fitazonana ny valiny mamaivay (amin'ireo manana fahatsapana gluten sy aretin'ny selily) Amin'ny alàlan'ny fampihenana ny fivontosan'ny vatana dia afaka manampy amin'ny fampihenana ny soritr'aretina sy ny fanaintainana ny olona iray, amin'ny olona maro.
Fomba fanoherana fanoherana ny aretina
Mazava ho azy, zava-dehibe ny fomba miadana iray rehefa manova ny sakafonao. Tsy misy olona manantena anao ny hanapaka ny gluten sy siramamy mandritra ny andro, fa ny hiezaka ny hampidina tsikelikely. Miezaha ihany koa hampihatra probiotics (bakteria tsinay tsara) amin'ny sakafonao isan'andro.
Ho azonao ny valisoa amin'ny endrika tsy fihenan'ny ratra sy ny fihenan'ny soritr'aretina. Saingy mila fotoana izany - indrisy fa tsy misy isalasalana izany. Ka eto dia tena mila manokan-tena ianao hiova, ary izany dia zavatra mety ho sarotra be rehefa marary ny vatana iray manontolo noho ny fibromyalgia. Betsaka ny olona no mihevitra fa tsy manam-bola hanaovana izany.
Izany no antony angatahinako anao dieny dingana. Ohatra. Raha mihinana mofomamy na vatomamy ianao imbetsaka isan-kerinandro, andramo hihena izany raha tsy faran'ny herinandro amin'ny voalohany. Mametraha tanjona ary alao izany, ara-bakiteny, tsikelikely. Maninona raha manomboka amin'ny fidirana aretin-kozatra ny sakafo?
Fantatrao ve fa ny fanatanjahan-tena efa niniana dia anti-inflammatory? Izany no antony namolavola fandaharan'asa fihetsiketsehana sy tanjaka ny fantsona Youtube ho an'ireo izay manana fibromyalgia sy rheumatism. Nametraka PRICE Lehibe izahay raha misoratra anarana (maimaim-poana) - ary mampahatsiahy anao fa hisy programa tsara maro any amin'ny ho avy.
Fanazaran-tena toy ny Anti-inflammatory
Ny fikarohana dia naneho fa ny fanatanjahan-tena sy ny fanatanjahan-tena dia misy fiantraikany manohitra ny fanaintainan'ny aretim-po (3). Fantatsika koa fa sarotra ny mahazo fanao fanazaran-tena tsy tapaka rehefa manana fibromyalgia hipoaka ny fahatezeranao-dehibe sy andro ratsy.
Noho izany, azontsika amin'ny alalantsika kiropraktika Alexander Andorff, namorona programa iray izay malemy fanahy sy namboarina ambonin`ny rheumatics. Eto ianao dia mahita fanazaran-tena dimy izay azo atao isan'andro ary mahatsapa olona maro izay manome fanamaivanana amin'ny tonon-kibo mafy sy hozatra miparitaka.
Aza misalasala misoratra anarana amin'ny saluran ho an'ny YouTube maimaimpoana (tsindrio eto) ho an'ny toro-hevitra fanatanjahan-tena maimaim-poana, programa momba ny fanatanjahan-tena ary ny fahalalana ara-pahasalamana. Tongasoa eto amin'ny fianakaviana izay tokony ho laninao!
Fibromyalgia sy ny aretim-panavotana
Izahay dia efa niresaka teo aloha ny fiantraikan'ny fanaintainana sy ny anjara toerana lehibe amin'ny fibromyalgia, ary koa ny rheumatism hafa. Ny fahalalana kely fotsiny momba izay tokony ho laninao tsy tokony hihinana dia zava-dehibe tokoa. Manoro hevitra izahay hamaky sy hianatra bebe kokoa momba ny sakafo fibromyalgia ao amin'ny lahatsoratra izay nifamatotra eto ambany.
Vakio koa: Ny zavatra rehetra tokony ho fantatrao momba ny Diaben'ny Fibromyalgia [Torolàlana Diet Lehibe]
Ny fitsaboana feno amin'ny Fibromyalgia
Ny fibromyalgia dia miteraka fambara sy fanaintainana hafa rehetra - ary noho izany dia mila fitsaboana feno. Mazava ho azy fa tsy mahagaga raha ireo manana fibro dia manana fampiasana fanafody fanaintainana avo kokoa - ary mila fanarahana bebe kokoa amin'ny mpitsabo aretin-tsaina na mpitsabo aretin-tsaina noho ireo izay tsy voakasik'izany.
Ny marary marobe koa dia mampiasa fahaiza-mitandrina sy fikarakarana tena izay heveriny fa mahomby ho an'ny tenany manokana. Ohatra, fanohanan'ny compression sy trigger teboka baolina, fa misy safidy sy safidy maro hafa koa. Manoro hevitra ihany koa izahay ny hanatevin-daharana ny vondrona mpanohana anao eo an-toerana - mety hiditra amin'ny vondrona nomerika toy ny aseho eto ambany.
Ananolo-tena ho an'ny fibromyalgia
Maro amin'ireo marary no manontany anay momba ny fomba ahafahan'izy ireo mandray anjara amin'ny fampihenana ny fanaintainana amin'ny hozatra sy ny tonon-taolana. Amin'ny fibromyalgia sy ny aretin'ny fanaintainana mitaiza, dia liana manokana amin'ny fepetra manome fialan-tsasatra isika. Noho izany dia faly izahay manoro hevitra fiofanana amin'ny dobo rano mafana, yoga sy fisaintsainana, ary koa ny fampiasana isan'andro ny tsihy akupresy (trigger point mat)
Soso-kevitra: acupressure fandrianao (Mivoha amin'ny varavarankely vaovao ny rohy)
Ity dia mety ho fandrefesana tena tsara ho anao izay mijaly noho ny fihenjanan'ny hozatra mitaiza. Ity tsihy acupressure ampifandraisinay eto ity dia tonga miaraka amin'ny fipetrahan-doha mitokana izay manamora ny fandehanana amin'ny hozatry ny tendany. Kitiho ny sary na rohy eto mba hamaky bebe kokoa momba izany, ary koa hijery ny fahafahana miantsena. Manolotra fivoriana isan'andro eo anelanelan'ny 20 sy 40 minitra izahay.
Fandrefesana tena hafa ho an'ny fanaintainana rheumatic sy maharitra
Crème Arnica na fanafanana hafanana (mety manampy amin'ny fanalefahana ny fanaintainana)
Vondrona mpanohana Fibromyalgia
Midira ao amin'ny vondrona Facebook «Rheumatism sy fanaintainan'ny aretina - Norvezy: Fikarohana sy vaovao» (tsindrio eto) ho an'ny fanavaozana farany momba ny fikarohana sy ny fanoratana media momba ny aretim-po na aretin-tsaina. Eto, ny mpikambana dia afaka mahazo fanampiana sy fanohanana - isaky ny andro ihany - amin'ny alàlan'ny fifanakalozana ny zavatra niainany sy torohevitra.
Mizarà am-poo hanohanana ireo manana Rheumatism
Miangavy anao izahay mba hizara an'io lahatsoratra io amin'ny media sosialy na amin'ny alàlan'ny bilaoginao(Aza misalasala mampifandray mivantana amin'ny lahatsoratra na tranokalanay vondt.net). Izahay koa dia mifanakalo rohy miaraka amin'ny tranonkala mifandraika (hifandraisa aminay amin'ny alàlan'ny hafatra amin'ny Facebook raha tianao ny hifanakalo rohy amin'ny tranokalanao na bilaoginao). Ny fahatakarana, ny fahalalana ankapobeny ary ny fitomboan'ny fifantohana no dingana voalohany mankany amin'ny fiainana andavanandro tsara kokoa ho an'ireo izay manana aretina mitaiza fanaintainana maharitra.
Loharano: Pubmed (Jereo ny loharano manokana ao amin'ny lahatsoratra)
https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/fibromyalgi-og-gluten.jpg?media=1648573622 368 700 loza https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/logo-website.png?media=1648573622 loza2020-02-18 17:36:512022-03-22 15:12:20Fibromyalgia sy Gluten: Afaka manome ratra bebe kokoa amin'ny vatana ve ny sakafo misy?
- Miaina miaraka amin'ny Ankylosing Spondylitis Torohevitra 9 ho an'ny torimaso tsara kokoa miaraka amin'ny Fibromyalgia